Umvelisi kunye noMthengisi weCarbon Steel Plate UKunda
Ipleyiti yesinyithi seCarbon, iphepha lekhabhoni yentsimbi, icarbon yentsimbi
Intsimbi yeCarbon yintsimbi enomxholo wekhabhoni ukuya kuthi ga kwi-2.1% ngokobunzima. Ukuqengqeleka okubandayo kweCarbon yensimbi yesinyithi esingaphantsi kwe-0.2-3mm, ukuqina okushushu kweCarbon plate ubukhulu be-4mm ukuya kuthi ga kwi-115mm
I-A36 D36 A32 D32,
Isetyenziswe kwisakhiwo sobunjineli kunye neendawo eziqhelekileyo zoomatshini, isakhiwo sokwakha i-rebar, isinyithi sesimo, i-rebar, njl
Iintsimbi ezingezo-alloy ezisetyenziselwa ukwenza izixhobo ezibalulekileyo ezisetyenziswa ngokubanzi emva kokunyanga,
Izakhiwo zobunjineli kunye namalungu oomatshini.
Izitshetshe, inqanawa, isikhongozeli, itanki njl.
Ipleyiti yesinyithi ngokubanzi
Ipleyiti yensimbi ephantsi
Ipleyiti yesinyithi yokwakha ephezulu
Ipleyiti yentsimbi ephezulu
Q390B, Q390C, Q390D, Q390e, Q420B, Q420C, Q420D, Q420e, Q460C, Q460D, Q460e, Q500C, Q500D, Q500e, Q550C, Q550 6 Q650 、 Q650 、 Q650 、 Q550 、 Q550 、 Q550 、 Q550 、 Q550 、 Q550 、 Q550 、 Q550 、 Q550 、 Q550 、 Q550 、 Q550 、 Q550 、 Q550 、 Q550 、.
CCS / ABS / GL / BV / DNV / KDK / LR, A, B, D, E, A, A32, D32, E32, F32, A32, D36, E36, F36, A40, D40, E40, F40, 、
Ipleyiti yesinyithi enganyangekiyo enobushushu obuphantsi
Isitya sensimbi kwibhoyila
Umgangatho ophezulu wentsimbi yekhabhoni yentsimbi
I-alloy ephantsi yamandla aphezulu
Q390, B / C / D / E,） Q420 (B / C / D / E, Q460, C / D / E, Q550, C / D / E, 、, Q690, B / C / D / E
Ubungakanani obuqhelekileyo (mm)
Plate: 25/30/40/60 ect
Ikhoyili: 4/6/10/12/18 ect
1. Ipleyiti yesinyithi
Yesicelo: Uhlobo lokuqala ingxubevange noshowo isakhiwo isetyenziselwa ukwenza iindawo ezahlukeneyo umatshini kunye nezinto zobunjineli. Esi sinyithi sinobulukhuni obuchanekileyo, uninzi lwazo lusetyenziselwa ukwenza izixhobo zezixhobo ezinendawo ezinamacandelo amakhulu. Uhlobo lwesibini sisixhobo sesinyithi. Njengoko kunokubonwa kwigama, olu hlobo lwentsimbi lusetyenziselwa ikakhulu ukwenza ezinye izixhobo, ezinje ngezixhobo zokulinganisa, izixhobo ezishushu nezibandayo zokubumba, iimela, njl. . Uhlobo lwesithathu yintsimbi yokusebenza ekhethekileyo, ene-infyoction ekhethekileyo ye-myocardial, ke izinto ezenziweyo zineempawu ezizodwa, ezinje ngentsimbi enganyangekiyo ngobushushu kunye nentsimbi enganxibaniyo, enokuhlangabezana neemfuno ezithile kwimveliso.
2. Isitya esomeleleyo sentsimbi
Yesicelo: High-amandla intsimbi uluhlu olubanzi izicelo. Enye yeendawo eziphambili sisicelo kumzimba wemoto. Ukuze kuphuculwe umgangatho othwala iimoto, ukunciphisa iindleko zokuvelisa iimoto, kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwepetroli, iipleyiti zentsimbi ephezulu zisetyenziswa kakhulu kwimveliso yeemoto ekhaya nakwamanye amazwe. Okukhona, kunye nenkqubo yokuvelisa amalungu isakhelo itshintshile kakhulu xa kuthelekiswa nenkqubo yokuqala imveliso mass. Isetyenziselwa ukwenza izinto ezinje ngemiqadi yeemoto, imiqadi, imingxunya yokuhambisa kunye namalungu eemoto, ezinokuthi zinciphise ubunzima bamalungu. Umsebenzi wokuqinisa (okanye ubunzima bokuqina) ungaphezulu kunaleyo yeepleyiti zesinyithi eziqhelekileyo kwaye unokufunxa amandla eempembelelo. Ke ngoko, isetyenziswa ngaphambili nasemva kwemiqadi emide yamagama asezantsi kunye neendawo ezifuna amandla aphezulu kunye nokuqina ukuphucula ukhuseleko kweemoto. Isetyenziselwa amalungu angaphandle omzimba, ukongeza ekunciphiseni ukutyeba kwamalungu, ngenxa yokuqina kokubhaka, emva kokuba ipeyinti ibhakiwe, ubunzima bomphezulu bamalungu bunokunyuswa, kunye nokusebenza okungahambelaniyo nomgangatho wangaphandle phuculwa. Iiprojekthi eziphambili zikazwelonke kufuneka ziyile kwaye zisebenzise iipleyiti zentsimbi ezinamandla aphezulu kunye nokwakha okuphezulu iipleyiti zentsimbi, ezinje ngezakhiwo zeqonga elingaselunxwemeni, iindawo zeOlimpiki, izakhiwo ezintsha zeCCTV, iShanghai World Expo, amadama, izitishi zamandla, kunye neziphezulu- nyusa izakhiwo.
Ukusetyenziswa kwepleyiti yentsimbi yaselwandle
Thintela umzimba wenqanawa ekungcolisweni ngamanzi amachiza amdaka, umhlwa we-electrochemical, izinto zasemanzini kunye neentsholongwane. Isetyenziselwa ukwenza iipleyiti zentsimbi kumgangatho wenqanawa nakwinqanawa yokuhamba kolwandle, elunxwemeni kunye nokuhamba ngenqanawa elwandle.
4 Ukusetyenziswa kwebhodi yesikhongozeli
Isetyenziswa njengesitya soxinzelelo, kwaye izinto ezikwipleyiti yesitya kufuneka zohluke ngokwenjongo, ubushushu kunye nokumelana nomhlwa.
Isetyenziswa ikakhulu ekwenziweni kwepetroleum, imichiza, ukwahlulwa kwegesi, ukugcinwa kunye nokuhanjiswa kwezitya okanye ezinye izixhobo ezifanayo, ezinje ngezitya ezahlukeneyo zenqaba, isinanisi sobushushu, iitanki zokugcina kunye neemoto zetanki.
Isetyenziswa ngokubanzi kwipetroleum, imichiza, isikhululo samandla, kwibhoyila nakwamanye amashishini.
Isetyenziselwa ukwenza izixhobo zokuphendula ubushushu, izixhobo zokufudumeza ubushushu, izahluli, iitanki ezijikelezayo, ioyile kunye neetanki zerhasi, iitanki zerhasi ezinamanzi, iigobolondo zoxinzelelo lwenyukliya, imigqomo yebhoyila, ioyile enamanzi kunye neesilinda zegesi, imibhobho yoxinzelelo oluphezulu lwamanzi kwizikhululo zombane, iiturbine volutes kunye nezinye izixhobo kunye namacandelo.
Egqithileyo Nxiba Plate Steel Resistant
Okulandelayo: Pipe engenanto
Umbhobho weCarbon Steel